Fitaovana fanasan-tanana tsy misy fifampikasohana natao andrana teo amin’ny tokantrano 1.000 tany Analanjirofo, mba hifehezana ny fiparitahan'ny COVID-19 sy hampiasana ny fomba fidiovana maharitra
Fénérive-Est, 31 aogositra 2020: Ny faritra Analanjirofo, any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara, dia nitondra fanavaozana mba entina mifehy bebe kokoa ny fiparitahan'ny COVID-19 amin'ireo distrika efatra ao aminy, toy ny Fénerive-Est, Soanierana Ivongo, Sainte Marie ary Vavatenina. Ny fanentanana isam-paritra « Fandio Tsotra » izay niatomboka tamin’ny alatsinainy 31 aogositra 2020 ary adika hoe “fitaovana fanasan-tanana tsotra” dia nentina nanapariahana ireo fitaovana fanasan-tanana (DLM) nohavaozina mba tsy hisy fifampikasohana intsony, amin’ny alalàn’ny fomba fanangonana ranonorana, izay efa vita andrana avy amin’ny UNICEF sy ny mpiara-miombon’antoka aminy. Ity fitaovana ity dia mitarika ireo mpampiasa rehetra hampihatra ny iray amin'ireo fihetsika sakana manan-danja indrindra, ho fisorohana sy fifehezana ny areti-mifindra, amin'ny alàlan'ny fanasana tanana eo anivon’ny mponina iray manontolo; fa ambonin'izany rehetra izany dia hanomezana antoka fa tsy ho voakasika ny paompy rehefa manasa tanana.
Nahitana trangana COVID-19 maro ny faritra Analanjirofo. Ity fanentanana vaovao izay andraisan’ny ministera isan-tsokajiny anjara ity ary tarihin'ny Sampan-draharaham-paritry ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana, miaraka amin'ny fanohanan'ny UNICEF dia hahafahana manamafy ny fanapariahana ireo hafatra sy fihetsika sakana ary mametra ny fihanaky ny otrik’aretina. Izany dia entina mampiroborobo ihany koa ny hetsika ataon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ho an’ny tombontsoa iombonana. Misy tokoa mantsy ireo fikambanan'ny tanora izay hanara-maso ireny hetsika ireny any an-toerana.
Ho fanombohana, ny fanomezana avy amin’ny UNICEF dia ahitana fitaovana DLM tsy misy fifampikasohana miisa 1000, miaraka amin'ny fitaovana fanangonana ranonorana sy savony izay hatolotra tokantrano 1000 ao amin’ny tanànan'i Fénerive-Est. Ny UNICEF koa dia namokatra boky kely 300 fampianarana ny fanamboarana DLM tsy misy fifampikasohana, miaraka amin'ny fitaovana fanangonana ranonorana izay ho zaraina isan-tokantrano. Ary ho fanaraha-maso ny fanatanterahana ny hetsika dia bisikileta miisa 20 no hatolotra ireo fikambanana mpiara-miasa toy ny « Miara-Miarina » sy « Jeunesse Malgache de Demain».
Ny tokantrano any Fénérive-Est ihany koa dia hampiasa ireo fitaovana efa niasa toy ny siny mavo, saron-tavoahangy fasiana ranon-tsavony ary tavoahangin-drano entina manamboatra fitaovana fanangonana ranonorana sy fasiana savony.
Ny UNICEF dia manamafy hatrany fa zava-dehibe ny fandraisan'anjaran'ireo ankohonana amin'ny fizàrana manasa tanana matetika amin’ny savony. Ity fitaovana vaovao ity dia tombony ho azy ireo tokoa.
Ny hetsika « FANDIO TSOTRA » dia haharitra mandritra ny volana septambra ary ahitana ihany koa fanentanana momba ny fidiovana any an-tokantrano izay mikasika indrindra ny fametahana ilay fitaovana DLM tsy misy fifampikasohana. Aorian'ny hetsika sy mandritra ny vanim-potoana aorian’ny COVID-19 dia manantena ny tompon'andraikitra eny an-toerana fa ho lasa fomba fanao mahazatra ny mponina rehetra tsy ankanavaka any amin’ny faritra Analanjirofo ny fomba fidiovana ary hitohy hatrany ny fanentanana azy ireo amin'ny fahatratrarana ny tanjona zero fanaovana maloto ankalamanjana «ODF» izay kasaina hotanterahina amin'ity taona 2020 ity, ao anatin’ny tetik’asa nasionaly MadaMadio.
“Misaotra an'ny UNICEF nanentana anay tamin'ity fitaovana mora vidy ity, tamin'ny alalàn’ny fampiasana fitaovana efa niasa ho an'ny fidiovana ao an-trano. Tsotra ilay izy, fa tena ilaina tokoa. Amin'izao fotoanan'ny krizy ara-pahasalamana izao dia voamarina fa ny fanasana tanana dia mamonjy ain'olona ”, hoy ny fanazavan'i Parfait Randrianimanana, mpitantana vonjy taitra eo amin'ny sampan-draharaham-paritra ara-pahasalama any Analanjirofo
Fanamafisana ny fahaiza-manao: fanohanana tsy azo ihodivirana entina manavotra aina